Nifarana tao Madrid ny World March - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Nifarana tao Madrid ny World March
Ny fanidiana an'ohatra dia hatao amin'ny alahady 8 martsa amin'ny 12 antoandro ao amin'ny Puerta del Sol
Ny Diabe faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena dia namarana ny fitsidihana tany Madrid.
Miala ny 2 Oktobra 2019 (Andro iraisam-pirenena tsy mitongilana) avy any Madrid, ny World March for Peace and Nonviolence dia hamarana ny diany aorian'ny fandalovany mankany amin'ny kaontinanta dimy nandritra ny dimy volana.
Miaraka amin'ny anton-taonan'ny Tontolo Vaovao tamin'ny Martsa 2009-2010, izay nandritra ny andro 93 nitsangatsangana firenena 97 sy kaontinanta dimy, dia nanolotra ny hanatontosana ity «World World» ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana 2019-2020 ity indray mandeha ity ary miverina amin'ny toerana fanombohana mitovy. mahatratra tanjona samihafa.
Manambara, mampahazava, manome feo
Voalohany, hanameloka ny toe-java-mampidi-doza mampidi-doza amin'ny fitomboan'ny fifandirana sy ny fitomboan'ny fandaniana amin'ny asa-tanana miaraka amin'ny faritra midadasika indrindra amin'ny planeta maro ny mponina no nahemotra noho ny tsy fisian-kanina sy rano.
Amin'ny fehezan-teny faharoa, mba hahitana ireo fihetsika samy hafa sy miovaova samihafa amin'ny fivoaran'ny olona, ​​vondrona ary vahoaka amin'ny toerana maro ho fankatoavana ny zon'olombelona, ​​tsy fanavakavahana, fiaraha-miasa, fiaraha-miasa milamina ary tsy famoretana.
Ary, farany, omeo feo vaovao ho an'ireo taranaka vaovao te-handray an-tànana, mametraka ny kolontsaina tsy fandeferana amin'ny eritreritra mitambatra, eo amin'ny fanabeazana, amin'ny politika, eo amin'ny fiaraha-monina ... toy ny hoe lasa tao anatin'ny taona vitsivitsy fametrahana ny fahalalàna ekolojika.
Ho fankalazana ny fiafaran'ity fitsangatsanganana an'izao tontolo izao dia hisy hetsika andiany izay hoentin'ireo protagonista maromaro.
Amin'ny Asabotsy 7 martsa amin'ny 12 antoandro, dia hotanterahina miaraka amin'ny "The Grow with Music Project" ao amin'ny Sekolin'i Manuel Núñez de Arenas ny 'Concert twinning ho an'ny fandriampahalemana, ny tsy fahatsiarovana ary ny tany' (Puente de Vallecas) sy ny budaya Ateneu (Manises-Valencia).
Hotanterahina ao amin'ny Ivotoerana Kolontsaina El Pozo (Avenida de las Glorietas 19-21, Puente de Vallecas) ny hetsika ary mahazo fidirana maimaimpoana mandra-pahatongan'ny fahafenoany feno.
Famaranana ny volana martsa
Efa amin'ny tolakandro, amin'ny 18:30 p.m. ny lanonana 'fanidiana ny volana martsa' dia hatao miaraka amin'ny fananganana sary misy ny lalana, fitsabahan'ny mpifanandrina avy amin'ny kaontinanta samihafa, ny teny faranana ary ny fikasihana mozika.
Ho hanana ny toerany io Trano arabo (Calle de Alcalá, 62) miaraka amin'ny fidirana malalaka.
Ny ampitson'io, ny alahady 8 martsa, amin'ny mitataovovonana ao amin'ny Puerta del Sol, amin'ny kilometatra 0, ny fanakatonana ara-panoharana ny fitsangatsanganana eran'izao tontolo izao maneran-tany izay hifarana dimy volana amin'ny dia mitovy Tao no nanombohan'ity fitsangatsanganana ity
Amin'ny 12:30 hariva, manoloana ny fivarotana nentim-paharazana Mallorcan, ny tandindon'ny olombelona ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena dia hatao miaraka amin'ireo vehivavy avy amin'ny kolontsaina samihafa, volavolan-kevitra iray misokatra amin'ny fandraisana anjaran'izay maniry hiditra amin'ity hetsika ity.
Ho fehiny, hanohana ny fihetsiketsehana ara-pivelomana ny mpikatroka fa handeha amin'ny tolakandro ny ivontoerana renivohitra.
Famoronana: Martine Sicard (Tontolo tsy misy ady ary herisetra)
Fampahalalana bebe kokoa amin'ny:
Nankalaza ny volana martsa i Paris sy ny faritra misy azy